Esi emeghe faịlụ APK na PC | Gam akporosis
Ignacio Sala | 01/07/2021 18:00 | APK, Nkuzi
Mepee faịlụ APK na PC ụbọchị ya agụọla. Kemgbe mmalite nke Playlọ Ahịa Google Play na 2008, ngwa ndị dị na ụlọ ahịa ngwa ngwa Google dị mgbe niile na usoro APK, usoro nke August 2021, a ga-renamed AAB, ya mere ọ bụ oge, na ngwa dị n'ụdị a adịkwaghị dị ka ha dị taa.
Ruo mgbe ngwa niile dị n'ụdị a, a ka nwere afọ ole na ole ịga, usoro emere iji belata ogo nke ngwa yana n'ihi ọrụ ya, belata ọnụ ọgụgụ pịịlị dị elu nke a na-ejikọkarị ya na usoro okike gam akporo.
1 Kedu ihe faịlụ APK
1.1 Ndi faịlụ APK dị mma?
1.2 Kedu ikikere nke APK kwesịrị ịrụ ọrụ?
2 Etu ibudata APKs na Google Play
3 Esi emeghe faịlụ APK na Windows
4 Esi emeghe faịlụ APK na Mac
5 Etu esi agba faịlụ APK na PC / Mac
5.2 MEMU egwu
Kedu ihe faịlụ APK
APK na-anọchi anya ngwugwu ngwugwu gam akporo ọ bụ ezie na akpọkwara ya ngwungwu Ngwa gam akporo. Ọ bụ usoro faịlụ gam akporo jiri kesaa ma wụnye ngwa. APK nwere ihe niile dị na ngwa chọrọ ka arụnyere na ngwaọrụ.
Ngwa bụ faịlụ abịakọrọ, Ọkpụkpọ nke ndị mmepe niile ji kesaa ngwa na gburugburu ebe obibi. Na izugbe, abịakọrọ faịlụ (dị ka zip, rar, ite ...) iji jikọta ọtụtụ faịlụ n'ime otu, iji mee ka ha nwekwuo obere ma ọ bụ mpikota onu ha iji chekwaa ohere.
Faịlụ na Ọdịdị APK bụ ụdị dị iche iche nke usoro JAR (Java), ebe ọ bụ na A na-ahazi sistemụ nrụọrụ a na Java. Ngwa niile bụ faịlụ ZIP na isi ha, mana ha ga-enwerịrị ozi ndị ọzọ iji rụọ ọrụ nke ọma dị ka APK.
Ndi faịlụ APK dị mma?
Ọ bụrụhaala na ibudata faịlụ APK site na Playlọ Ahịa Google, ị nwere ike ijide n'aka na faịlụ ndị ahụ enweghị faịlụ obi ọjọọ, dị ka ngalaba nyocha ngwa Google bụ maka nyocha ha, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ị nwere ike sinik ụfọdụ ndị ọzọ ngwa na obi nzube.
Ọ bụrụ na anyị họrọ ibudata faịlụ APK site na isi mmalite ndị ọzọ karịa ụlọ ahịa Google, anyị nwere ihe egwu na ngwa ahụ nwere ụdị ụfọdụ nke sọftụwia ọjọọ ejirila. Dekọọ ọrụ anyị na smartphone.
Nke ahụ apụtaghị na APK niile na-adịghị na Storelọ Ahịa Play nwere koodu ojooHa enweghị ike ịdị na ụlọ ahịa ngwa Google n'ihi na ha anaghị agbaso ntuziaka niile nke nnukwu ọchụchọ ahụ chọrọ.
Ihe atụ nke ngwa adịghị na Storelọ Ahịa Play na nke ahụ ọ bụ kpam kpam nchebe bụ ihe nrụnye maka Egwuregwu Epic, ngwa nke anyị nwere ike iji wụnye Fortnite na ngwaọrụ anyị. Google chụpụrụ ngwa a nke ụlọ ahịa gị mgbe ọ gụnyere ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ya, si otu a na-amafere nke Google guzobere.
Ọ bụrụ na anyị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara nchekwa nke APK nke anyị budatara, anyị nwere ike iji webụ Nkpuru virus na nyochaa faịlụ ebudatara ma si otú a nwee ike ịhapụ obi abụọ.
para kpuchido ndị ọrụ nwere obere ihe ọmụma, Android nwa afọ anaghị ekwe ka ịwụnye faịlụ APK nke na-esite na Storelọ Ahịa Play. Iji mee nke ahụ, anyị ga-ebu ụzọ mee nhọrọ ahụ Amaghị mmalite n'ime ntọala ntọala. Ozugbo emere nhọrọ a, anyị ga-enwe ike ịwụnye APK ọ bụla ruru aka anyị.
Kedu ikikere nke APK kwesịrị ịrụ ọrụ?
Ọ bụrụ na tupu ịwụnye ngwa, ịchọrọ ịma ikikere ọ chọrọ ka ọ rụọ ọrụ, anyị nwere ngwa APK-Info anyị nwere, a kpam kpam free ngwa na anyị nwere ike budata na GitHub, ebe koodu ntinye a di.
Site na ngwa ahụ n'onwe anyị, anyị nwere ike nyochaa ngwa ahụ site na Virus Total, nweta faịlụ ngwa ahụ na Storelọ Ahịa Play, wụnye ya na ama anyị site na ADB ...
Etu ibudata APKs na Google Play
Mana, nke mbu, anyi aghaghi ibudata faịlụ ngwa nke anyi choro inweta site na PC anyi. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na anyị nwere ikike anyị a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọzọ na Storelọ Ahịa Play Nke ahụ kwere anyị budata ma wụnye APK na smartphone anyị, ọ kacha mma ịme ya mgbe niile site na Storelọ Ahịa Play, belụsọ na ọ bụ ngwa na-adịghị na ngwa ngwa Google.
Ọzọkwa, dịka ebumnuche anyị bụ imepe faịlụ ahụ na PC, ọ ga-adị mma ka anyị si na ya rụọ ọrụ a ka ị ghara bulite faịlụ ahụ gaa n'igwe ojii, ziga ya site na email, site na ngwa izipu ozi ... budata APK na Google Play, anyị ga-eji web Download Download APK.
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịnweta adreesị weebụ ebe ngwa ngwa Storelọ Ahịa Play nke anyị chọrọ ibudata dị na detuo url ahụ.
Ọzọ, anyị na-enweta web Downloader web na na igbe dị n'elu anyị na-ete URL nke egwuregwu ahụ ma ọ bụ ngwa ahụ na anyị chọrọ ibudata wee pịa bọtịnụ ahụ Igbanye Nbudata Ntanetị.
N'ikpeazụ, a gosipụtara taabụ na nkọwa nke egwuregwu ma ọ bụ ngwa ahụ, gụnyere nha faịlụ ahụ, nọmba mbipute na oge ikpeazụ emelitere. Iji budata ya, pịa bọtịnụ ahụ Pịa ebe a iji budata ...
Esi emeghe faịlụ APK na Windows
N'ịbụ faịlụ abịakọrọ, ọ bụrụ na anyị chọrọ imeghe faịlụ na usoro APK, naanị anyị ga-eji onye nyocha Windows faịlụ nweta faịlụ niile dị n'ime nke faịlụ na APK ngwa.
Usoro kachasị ọsọ iji nwee ike ime ya bụ gbanwee .APK ndọtị ka .ZIP. N'ụzọ dị otú a, usoro ahụ ga-amata faịlụ ahụ dị ka faịlụ abịakọrọ na site na ịpị ya ugboro abụọ, ọ ga-egosi anyị ọdịnaya niile dị n'ime.
Esi emeghe faịlụ APK na Mac
Usoro iji nweta faịlụ niile dị na faịlụ .APK na macOS, bụ otu ihe ahụ na WindowsEbe ọ bụ na Apple sistemụ maka kọmputa na-akwado usoro .ZIP.
Etu esi agba faịlụ APK na PC / Mac
Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ abụghị imeghe faịlụ, mana ihe anyị chọrọ bụ wụnye APK na kọmputa anyị, jikwaa Windows ma ọ bụ macOS, ihe anyị ga - eme bụ iji ihe emulator Android.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere gam akporo emulators, anyị ga-ekwu okwu banyere ndị kasị ewu ewu na ha niile: BlueStacks. Emulator a, dị maka Windows na macOS, na-enye anyị ohere ịwụnye ma na-agba ngwa ngwa ọ bụla APK, n'agbanyeghị ebe o si.
para jiri faịlụ BlueStacks rụọ ọrụ faịlụ APKOzugbo anyị arụnyere ya, anyị ga-pịa ugboro abụọ na faịlụ ahụ ka ọ bụrụ, ebe ọ bụ na mgbakwunye a jikọtara na ngwa a, BlueStacks na-akpaghị aka na-emepe ma ntinye ngwa ahụ amalite.
Nhọrọ ọzọ bụ ịwụnye ngwa site na nhọrọ nhọrọ ngwa n'aka nri. BlueStacks chọrọ akaụntụ GoogleEbe ọ bụ na egwuregwu na ngwa niile na-eji ọrụ Google eme ihe. Nbudata nke ngwa a bu n'efu ma adighi etinye onu ahia.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị na gam akporo emulator maka Windows (ọ nweghị ụdị maka macOS) bụ MEMU egwu, emulator na-enye anyị ihe fọrọ nke nta otu ọrụ anyị nwere ike ịchọta na BlueStacks na nke ahụ na-enye anyị ohere ịwụnye APK ọ bụla.
Iji wụnye APK na MEMU Play, anyị ga-pịa ugboro abụọ na faịlụ ahụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị emulator ọzọ arụnyere. Ọ bụrụ na anyị nwere ihe karịrị otu emulator arụnyere na mgbakwunye APK enweghị MEMU Play, anyị ga-pịa bọtịnụ aka nri nke ngwa ahụ, họrọ Mepee ma pịa MEMU Play.
MEMU Play arụmọrụ chọrọ dị ala karịa ndị nke BlueStacks chọrọ, yabụ ọ bụrụ na kọmputa gị esighi ike, ị kwesịrị ịtụle ngwa a na-agba ọsọ faịlụ APK na PC gị ma ọ bụ Mac.
MEMU Play chọrọ akaụntụ GoogleEbe ọ bụ na egwuregwu na ngwa niile na-eji ọrụ Google eme ihe. Nbudata nke ngwa a bu n'efu ma adighi etinye onu ahia.
NoxPlayer, maka Windows na macOS, na-enye anyị a interface yiri nnọọ BlueStack, Ọ dabeere na gam akporo 7 Nougat ọ bụ ezie na ụdị beta nke dabere na gam akporo 9 adịlarị.
para wụnye APK na PC ma ọ bụ Mac anyị site na NoxPlayer, anyị na-aga n'ihu otu ihe ahụ dị ka na BlueStacks, na-apị ugboro abụọ na ngwa ahụ, ọ bụrụhaala na anyị enweghị onye ọzọ emulator arụnyere na mgbakwunye na-emetụta ya.
Ọ bụrụ otu a, pịa bọtịnụ nri aka nri na ngwa ahụ, họrọ nhọrọ Mepee ya na ma anyị họrọ NoxPlayer.
NoxPlayer chọrọ akaụntụ GoogleEbe ọ bụ na egwuregwu na ngwa niile na-eji ọrụ Google eme ihe. Nbudata nke ngwa a bu n'efu ma adighi etinye onu ahia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » APK » Esi emeghe faịlụ APK na PC
Ndabere 20mg dijo
Mmasị web APK Downloader, amaghị m ya. Enwere m ya na Ọkacha mmasị.
Ana m ebudata APK ma anaghị m eme ya na PlayStore. Ihe kpatara ya bụ na GooglePlay ma ọ bụ PlayStore abụghị 100% a pụrụ ịtụkwasị obi ma, enwere ọtụtụ nje, na mgbe ị na-ebudata ngwa site na ha, a ga-arụnye ya na akpaghị aka. Ọ bụrụ na ibudata APK nke ngwa ọ bụla (ana m eme ya na kọmputa mgbe niile) mgbe ahụ ị nwere nhọrọ iji nyochaa APK na Nje Virus niile, nke ị nwere ike ibudata APK site na ibe APK ọ bụla na enweghị nsogbu, n'ihi na ọ bụrụ na enwere enweghị nje Ọ bụla na peeji nke nbudata na-arụ ọrụ (ọ bụ ezie na m na-eme ya mgbe niile site na ndị kachasị ewu ewu).
Kedu otu m ga-esi nyefee APK na ekwentị iji wụnye ya?… Ọfọn, dị mfe, site na ngwa DRIVE. Site na kọmputa m na-ebugo APK na akaụntụ DRIVE m ma ugbu a site na ekwentị m meghere DRIVE, m na-achọ APK ma budata ya wee wụnye ya.
Zaghachi Bilaxten 20mg